Ma yahay clenbuterol maxaase saameyn ku leh caafimaadkiisa | Ragga Stylish
Jarmal Portillo | | Fitness, nololeedka
Dadka ku jira qolka jimicsigu waxay u baahan yihiin hab fudud oo si dhakhso leh wax loogu qabto. Sabirku maahan cunsur qof kastaahi leeyahay, marka ujeed kasta oo uu leeyahay, waxaad had iyo jeer isku daydaa inaad hesho waddo gaaban. Mid ka mid ah walxaha ugu baahida badan ee loo yaqaan 'anabolic anabolic' ee adduunka jimicsiga ee loo yaqaan 'toobiye' ayaa ah clenbuterol. Waa walax dhiska ka caawisa luminta dufanka, laakiin saamayn badan oo taban ku leh jidhka. Si kastaba ha noqotee, waxay umuuqataa in dadku kaliya ay hayaan inay ka caawineyso gubida dufanka oo aysan u istaagin inay u maleeyaan inay tahay cunsur waxyeelo u leh caafimaadka.
Qodobkaan waxaan ku sharaxeynaa waxa uu yahay 'clenbuterol', saameynta uu ku leeyahay caafimaadka iyo sida uu ugu shaqeeyo jirka.
1 Dadka raadinaya toobiye
2 Sida ay u shaqeyso
3 Clenbuterol ee jimicsiyada
4 Maxay u rabaan inay qaataan?
Dadka raadinaya toobiye
Markii hore jimicsiga waxaad kaliya aragtay dad isu diyaarinaya jir dhiska. Dadka waaweyn, muruqyada ah ee daroogada u isticmaali jiray tartamada, oo leh xididdo ka badan haadka ay waddo weyn leedahay. Si kastaba ha noqotee, moodada iyo imaatinka "jimicsi", astaamo cusub ayaa dhashay oo aan nafteena ku aragno qolka jimicsiga. Waxaan la kulannaa dhalinyarada doonaya inay si dhaqso ah u helaan murqaha si ay u muujiyaan jir weyn xagaaga, haweeneyda da 'dhexaadka ah oo miisaankeedu sarreeyo, laakiin aan dooneyn inay jimicsi sameyso oo miisaanka si dhakhso leh u dhacdo iyo midka doonaya inuu la tartamo "dabiici" , laakiin waxay ku egtahay tagista walxaha daroogada.
Dhamaan dadkani waxay wadaagaan inay doonayaan hadaf dhaqso badan oo ka fudud kan dabiiciga ah. Si tan loo sameeyo, waxay ka raadiyaan clenbuterol suuqa madow, maadaama aysan sharci aheyn in daawo ahaato walxo qatar ku ah noolaha.
Clenbuterol waa wax aan ka badnayn bronchodilator ka caawiya dhibaatooyinka neefsashada kuwa qaba neefta, xasaasiyadda, ama oof-wareenka. Waa daawada loo yaqaan 'adrenergic receptor agonist' oo loo isticmaalo daaweynta neefta iyo boronkiitada, xiiqda iyo spatic-ba. Ahaanshaha daroogada, qaadashada waa in dhakhtar kuu qoro si murqaha u nastaan ​​oo ay si fiican u neefsadaan.
Si kastaba ha noqotee, haddii aan eegno qeexitaanka clenbuterol ee RAE waxaan helnaa waxyaabaha soo socda: "Maaddada Anabolis-ka ee loo isticmaalo naaxinta macmalka ah ee lo'da iyo cayayaanka doping '.
Tani waxay nagu hogaamineysaa inaan u maleyno in halyeey ku dhashay agagaarka sheygan ama in loo isticmaalay saameyn kale. Aynu u aragno si faahfaahsan.
Furaha sheygan ayaa ah kala duwanaanshaha adeegsiga. Waxay u adeegi kartaa sidii bronchodilator maadaama ay leedahay awood ay ku nasato murqaha. Si kastaba ha noqotee, waxay sidoo kale leedahay sifooyin anabolic. Waxyaabahani waxay gacan ka geystaan ​​helitaanka culeyska muruqyada waxayna leeyihiin saameyn kuleylka jirka, halkaasoo heerkulka jirku uu kordho uuna sababo kalooriyaal badan oo gaas ah xilliga nasashada.
Iyadoo kharash badan oo kalooriye ah, luminta dufanka ayaa aad uga fudud. Kuwani waa guryaha ka dhigay caanka ah 'clenbuterol'. Wax kasta oo soo galay sheygan waxay ka yimaadaan yoolalka ugu muhiimsan ee jir dhiska iyo baahidaada inaad si dhaqso leh oo fudud u sameyso: murqaha oo aad lumiso dufanka.
Lixdameeyadii, lo'da ayaa la bilaabay in lagu bixiyo wajigii ugu dambeeyay ee taranka ee naaxinta weyn, ka dib markii la ogaaday sifooyinkan dhiska ah. Ganacsigani wuu sii socday ilaa la arkay saamaynta ay ku yeesheen dadka cunay xayawaanka loo yaqaan 'clenbuterol'. Ayaa lasoo saaray arrhythmias, tachycardias, casiraad, gariir, dhidid badan, hurdo la'aan, dhiig kar, murqo xanuun, iwm.
Mar dambe, 1990, kiiskii ugu horreeyay ee sunta ah ee ka soo baxa badeecadan ayaa laga diiwaangeliyey Asturias.Tirada ayaa sii kordhay illaa 1996, markii la go'aansaday in laga mamnuuco Yurub oo dhan. Tan iyo sanadkaas, naaxinta xoolaha iyada oo loo marayo isticmaalka daroogooyinkaasi waa gebi ahaanba sharci darro. Waqtigan xaadirka ah waxaa jira kontaroolo kala duwan oo labada ciyaartooy ah iyo xoolahaba si looga fogaado clenbuterol.
Baaskiileyda waxaan sidoo kale kaheleynaa xoogaa faa iidooyin ah iska caabin iyo awood kuwa cuna, sidaa darteed xakamaynta kahortaga doping waxay isku dayeysaa inay iska ilaaliso xaalada noocan ah.
Clenbuterol ee jimicsiyada
Goobaha jimicsiga waxaad ka heli kartaa dad badan oo ku jira qolalka beddelaadda oo awood kuu siin kara walxaha daroogada ku isticmaala. Xitaa marar badan waa isla kormeerayaasha sameeya. Waxa lagu yiraahdo jimicsiga waa in "ama aad baaskiil wadatid, ama aadan cidna ahayn." Waa run in dabiici ahaan ay aad u adag tahay in la gaaro jir dhismeed aad jeceshahay. Laakiin taasi waa halka caqabaddu ka jirto. Inaad yeelato jir aad u qiimo badan oo caafimaadkaaga ah waxba ka tari mayso wax qiimo ahna ma leh. Is-qiimeynta ayaa ku dhegan qorshahaaga cuntada iyo qorshaha jimicsiga, noqoshada joogtada ah, iyo tababarka si adag kaligaa. Wax kasta oo aad hesho, farxadda muddada-dheer ee ay kuu keento waa mid aad u weyn. Sidoo kale, waad ogtahay inaad caafimaad kuheleyso oo aan lagaa lumin.
Clenbuterol mar dambe laguma iibin xitaa farmashiyaasha. Waxaa lagu qaadan karaa kaniiniyada waxayna kaa dhigeysaa inaad dareento awood, xoog iyo waligaa daal la'aan. Si kastaba ha noqotee, dad badan oo qaata badanaa waxay yiraahdaan haddii aad ku bilowdo qiyaaso culus waxaad dareemeysaa sida wadnahaagu u qarxay. Badeecadan lama barbar dhigi karo daawo, maadaama aysan isku mid ahayn. Qiyaasaha aad u qaadato jimicsiga ayaa aad uga sareeya kuwa lagu talin lahaa haddii aad qabto cudur neefsashada ah. Sababtaas awgeed, kuwa qaata badiyaa waxay helayaan dhidid, xasaasiyad iyo gariir.
Mid ka mid ah saameynta ay ka baqayaan ayaa ah inay abuurto dulqaad, sidaa darteed waa inaad qaadataa wax badan iyo in ka badan si aad u hesho saameyn isku mid ah.
Maxay u rabaan inay qaataan?
Kuwa ugu badan ayaa ah wiilka miisaanka saaray oo doonaya inuu xagaaga si wanaagsan u muuqdo ama haweeneyda dhexdhexaadka ah oo miisaankeedu badan yahay oo aan jimicsi rabin. Maskaxda ku hay in clenbuterol ay la mid tahay inaad baabuur dhigto kun kacaan laakiin aadan bilaabin. Faa’iido maleh qaadashadeeda haddii aadan dhaqaaqin, jimicsi sameyn, cunin raashin, iwm.
Haddii ay wali tahay inaad wax walba qabato, maxaad u dooneysaa inaad waxyeello u geysato caafimaadkaaga adigoo toobiye qaadanaya? Sidee muhiim u tahay fikradda inteeda kale ee ku saabsan jirkaaga? Waxaa fiican inaad caafimaad qabtid oo aad si dabiici ah u sameyso. Waxaad arki doontaa in jirkaagu qadarin doono mustaqbalka fog.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Clenbuterol